Iindaba-Ukuchaza ukuPakisha okuThuthwayo okuThuthwayo kunye nokusetyenziswa kwaso NGURICK LEBLANC
Eli linqaku lokuqala kuthotho oluneenxalenye ezintathu nguJerry Wamkelekile, owayesakuba ngumongameli woMbutho wokuPakisha onokuthi uphinde usebenze. Inqaku lokuqala lichaza ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nenxaxheba kwindima yokubonelela. Inqaku lesibini liza kuxubusha ngezibonelelo zoqoqosho nezokusingqongileyo zokupakishwa kwezothutho ezinokusetyenzwa kwakhona, kwaye inqaku lesithathu liya kubonelela ngeeparameter kunye nezixhobo zokunceda abafundi babone ukuba kuyanceda na ukutshintsha yonke into okanye ezinye zenkampani ezisebenzisa ixesha elinye okanye ukupakisha kwinkqubo yokupakisha yothutho enokuphinda isebenze.
Ukubuyiswa okubuyisiweyo kuphucula ukusebenza ngokufanelekileyo
Ezinokuphinda zisetyenziselwe ukusebenza ngo-101: Ukuchaza ukuPakisha okuThuthwayo okuSetyenziswayo kunye nokuSebenza kwaso
Ukupakishwa kwakhona kothutho okuchaziweyo kuchaziwe
Kwimbali yakutshanje, amashishini amaninzi amkele iindlela zokunciphisa ukupakisha, okanye umsebenzisi wokugqibela. Ngokunciphisa ukupakishwa okungqonge imveliso uqobo, iinkampani zinciphise inani lamandla kunye nenkunkuma echithwayo. Ngoku, amashishini athathela ingqalelo iindlela zokunciphisa ukupakishwa abasebenzisa ukuhambisa iimveliso zabo. Eyona ndlela ineendleko kunye nefuthe lokufezekisa le njongo kukupakisha kwakhona kwezothutho.
Umbutho wokuPakisha onokuthi uphinde usebenze (i-RPA) uchaza ukupakishwa okunokuphinda kusetyenziswe njengeepelethi, izikhongozeli kunye nentlabathi eyilelwe ukusetyenziswa kwakhona ngaphakathi kwenkqubo yokuhambisa. Ezi zinto zenzelwe iihambo ezininzi kunye nobomi obandisiweyo. Ngenxa yendalo yabo enokuphinda isebenze, banikezela ngembuyekezo ekhawulezileyo kutyalo-mali kunye neendleko eziphantsi-kuhambo ngalunye kunemveliso yokupakisha enye. Ukongeza, zinokugcinwa ngokufanelekileyo, ziphathwe kwaye zisasazwe kulo lonke unxibelelwano. Ixabiso labo linokulinganiswa kwaye liqinisekisiwe kumashishini amaninzi kunye nokusetyenziswa. Namhlanje, amashishini ajonge ukuphinda asetyenziswe njengesisombululo sokubanceda ukunciphisa iindleko kwikhonkco lokubonelela kunye nokuhlangabezana neenjongo zabo zokuzinza.
Iipelethi ezinokuphinda zisetyenziselwe kunye nezikhongozeli, ezenziwe ngokhuni oluqinileyo, intsimbi, okanye intombi enyulu okanye umxholo weplastikhi owenziwe ngokutsha, (onganyangekiyo kwiikhemikhali kunye nokufuma okuneempawu ezifanelekileyo zokugquma), ziyilelwe iminyaka emininzi yokusetyenziswa. Ezi ziqulatho zomeleleyo, ezinobungqina bokufuma ziyakhelwa ukukhusela iimveliso, ngakumbi kwiindawo ezinoburharha zokuhambisa.
Ngubani osebenzisa ukuphakheja kwakhona?
Iintlobo ngeentlobo zamashishini kunye nemizi-mveliso ekwenzeni, ukuphatha izinto, ukugcinwa kunye nokusasazwa kuye kwafumanisa izibonelelo zokupakishwa kwakhona kwezothutho. Nantsi eminye imizekelo:
· Abenzi be-elektroniki kunye nekhompyuter kunye nabahlanganisi
· Abavelisi bamalungu ezithuthi
· Izityalo zebandla lezithuthi
· Zininzi nezinye iintlobo zabavelisi
· Abenzi nabasasazi bokutya
· Abavelisi benyama kunye neenkukhu, iiprosesa kunye nabasasazi bazo
· Velisa abalimi, ulungiso lwentsimi kunye nokuhanjiswa
· Abathengisi bevenkile zokutya, izinto zobisi, inyama, kunye nemveliso
· Ukuhanjiswa kweebhaki kunye nederi
· Abenzi beelekese kunye neetshokholethi
Intengiso kunye nokuhanjiswa kwemveliso yabathengi
· Amatyathanga eeSebe
· Iivenkile ezinkulu kunye neevenkile zeklabhu
· Kwiikhemesti ezithengisayo
· Abasasazi bemagazini nabasasaza iincwadi
· Abathengisi bokutya okukhawulezayo
· Imixokelelwane yokutyela kunye nabanikezeli ngeempahla
· Iinkampani zeenkonzo zokutya
· Abapheki beenqwelo moya
· Abathengisi bezinto ezizenzekelayo
Iindawo ezininzi kwikhonkco lokubonelela zinokuxhamla kupakisho lothutho olunokuphinda lusebenze, kubandakanya:
Imithwalo yempahla engenayo: Imathiriyeli ekrwada okanye izinto ezingaphantsi ezithunyelwa kwindawo yokulungisa okanye yokuhlanganisa, ezinje ngezixhobo ezothusayo ezithunyelwa kumzi-mveliso wendibano yeemoto, okanye umgubo, iziqholo, okanye ezinye izinto ezithunyelwa kwindawo yokubhaka enkulu.
Umsebenzi wokutyala okanye wokufaka ngaphakathi kwinkqubo: Iimpahla zihanjiswe phakathi kwendibano okanye kwiindawo zokulungisa ngaphakathi kwesityalo esinye okanye zithunyelwe phakathi kwezityalo ngaphakathi kwinkampani enye.
Izinto ezigqityiweyo: Ukuhanjiswa kwempahla egqityiweyo kubasebenzisi ngokuthe ngqo okanye kusetyenziswa uthungelwano lokuhambisa.
· Iinkonzo zeenkonzo: "Emva kwemarike" okanye iindawo zokulungisa ezithunyelwe kumaziko enkonzo, abathengisi okanye amaziko okusasaza avela kwimizi-mveliso.
Ipallet kunye nokudibanisa ikhonteyina
Iinkqubo ezivaliweyo zelaphu zilungele ukupakishwa kwezothutho ezinokuphinda zisetyenziswe. Izikhongozeli ezinokuphinda zisebenze kunye neepelethi zihamba ngenkqubo kwaye zibuyele zingenanto kwindawo yazo yokuqala (ukubuyela umva kwempahla) ukuqala yonke inkqubo kwakhona. Ukuxhasa ukubuyela umva kwezinto kufuna iinkqubo, oovimba kunye nezixhobo zokulandela umkhondo, ukubuyisa nokucoca izikhongozeli ezinokusetyenzwa kwakhona kwaye emva koko kuziswe kwindawo yemvelaphi ukuze zisetyenziswe kwakhona. Ezinye iinkampani zenza iziseko zophuhliso kwaye zilawule inkqubo ngokwazo. Abanye bakhetha ukukhupha izinto zokusebenza. Ngokudityaniswa kwepallet kunye nekhonteyina, iinkampani zikhupha izinto ezisetyenziswayo kwipallet kunye / okanye kulawulo lweekhonteyina kwinkonzo yolawulo lokudibanisa iqela lesithathu. Ezi nkonzo zinokubandakanya ukudityaniswa, ulungiselelo, ukucocwa kunye nokulandelwa kweeasethi. Iipelethi kunye / okanye izikhongozeli zisiwe kwiinkampani; iimveliso zithunyelwa ngekhonkco lokubonelela; emva koko inkonzo yokurenta ithatha iipelethi ezingenanto kunye / okanye izikhongozeli kwaye ibabuyisele kumaziko enkonzo ukuze ahlolwe kwaye alungiswe. Iimveliso zokudibanisa zihlala zenziwe ngomgangatho ophezulu, ukhuni olomeleleyo, isinyithi, okanye iplastiki.
Iinkqubo zokuvula ezivulekileyo ihlala ifuna uncedo lwenkampani yolawulo lokudibanisa iqela lesithathu ukufezekisa ukubuya okunzima ngakumbi kokupakishwa kwezothutho okungenanto. Umzekelo, izikhongozeli ezinokuphinda zisebenze zinokuthunyelwa ukusuka kwindawo enye okanye ezininzi ukuya kwiindawo ezahlukeneyo. Inkampani yolawulo lokudibanisa imisela uthungelwano lokudibanisa ukuququzelela ukubuya kwezinto ezingenanto ezinokuphinda zisetyenziswe. Inkampani yolawulo lokudibanisa inokunikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezinje ngokubonelela, ukuqokelela, ukucoca, ukulungisa kunye nokulandela umkhondo wokupakisha kwezothutho. Inkqubo esebenzayo inokunciphisa ilahleko kwaye isebenzise ukusebenza ngokufanelekileyo kwenkqubo yokuhambisa.
Kwezi zicelo zinokuphinda zisetyenziselwe ukusebenza kwemali eyinkunzi kuphezulu ukuvumela abasebenzisi bokugqibela ukuba bafumane izibonelelo zokuphinda basebenzise ngelixa besebenzisa imali yabo kwimisebenzi ephambili yeshishini. I-RPA inamalungu aliqela angabanini bayo kwaye irente okanye badibanise iiasethi zabo ezinokuphinda zisebenze.
Imozulu yangoku yezoqoqosho iyaqhubeka nokuqhuba amashishini ukuba anciphise iindleko apho kunokwenzeka khona. Kwangelo xesha, kukho ulwazi kwihlabathi liphela ukuba amashishini kufuneka atshintshe ngokwenene iindlela zawo ezichitha ubutyebi bomhlaba. Le mikhosi mibini ikhokelela kumashishini amaninzi amkela ukupakishwa okunokuphinda kusetyenzwe, zombini njengesisombululo sokunciphisa iindleko kunye nokuqhuba kozinzo lokubonelela.